Uyisebenzisa njani ibhokisi yencoko yababini kwiLizwi 2016
ILizwi 2016 inendawo enye apho onke amaphupha akho okufomatha ifonti anokuzaliseka. Yibhokisi yencoko yababini ebhalwe kakuhle, eboniswe kweli nani lilandelayo.
Ibhokisi yencoko yababini ebhalwe ngokucocekileyo.
Ukubiza ibhokisi yencoko yababini, thobela la manyathelo:
Kwiqela lamagama, cofa ibhokisi yencoko yababini.
Iqhosha lifumaneka kwikona esezantsi ekunene yeqela lamagama.
Sebenzisa ibhokisi yencoko yababini ukuvula ibhokisi yencoko yababini.
Ibhokisi yencoko yababini iqulathe konke imiyalelo yokufomatha isicatshulwa, kubandakanya uninzi oluninzi olungakhange lufumane indlela eya kwiqela lamagama akwiRibhoni. Njengazo zonke iifomathi zokubhaliweyo, imiyalelo oyikhethayo kwibhokisi yencoko yababini yefonti ichaphazela nawuphi na umbhalo omtsha owuchwethezayo okanye nawuphi na umbhalo okhethiweyo kuxwebhu lwakho.
Xa ugqibile ukuseta izinto zakho zefonti, cofa kwindawo ethi Kulungile. Okanye ucofe ku Rhoxisa ukuba undwendwela nje.
Sebenzisa i-Ctrl + D indlela emfutshane yebhodi yezitshixo ukubiza ibhokisi yencoko yababini.
Esona sibonelelo silungileyo kwibhokisi yencoko yababini yifayile yokujonga kuqala, emazantsi. Le festile ikubonisa ngqo ukuba ukhetho lwakho luchaphazela njani okubhaliweyo kuxwebhu lwakho.
Amagama amafonti + Umzimba kunye + Isihloko bhekisa kwiifonti ezikhethwe ngumxholo woxwebhu wangoku. Oku kwenzelwe ukuba usebenzise imiyalelo yomxholo weLizwi ukutshintsha ngokukhawuleza iifom zomzimba kunye nezihloko zoxwebhu lonke ngexesha elinye.
Cofa kwibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yebhokisi yeeMpembelelo zeZicatshulwa ukufikelela kumanqaku okubhaliweyo anomdla njengeShadow, i-Outline, i-Emboss kunye ne-Engrave.
Ibhokisi yencoko yababini bebhokisi yencoko yababini abaphambili ibamba iinketho zokutshintsha ubungakanani kunye nokuma kokubhaliweyo kumgca.
I Cwangcisa njengokwendalo kwiqhosha lebhokisi yencoko yababini isetyenziselwa ukutshintsha ifonti esetyenziswa liLizwi kuxwebhu olutsha. Ukuba ukhetha ukusebenzisa ifonti ethile kuwo onke amaxwebhu akho, khetha ifonti (kunye nezinye iimpawu zesicatshulwa) kwibhokisi yencoko yababini, emva koko ucofe Cofa njengeqhosha elimiselweyo. Kwibhokisi yencoko yababini ebonakala, khetha ukhetho Onke amaXwebhu ngokususelwa kwiTemplate yesiqhelo, emva koko ucofe iqhosha le-OK. Emva koko, onke amaxwebhu aqala ngokhetho lwamagama owukhethileyo.
i-antibiotiki yomqala womqala
yabelana ngefayile kugoogle drive
Iipilisi ezijikelezayo zeorenji 1/2
oxycodone / acetaminophen 5-325
i-triamt hctz 37.5 25 ithebhu
isebenza njani pamabrom